Umaki: ukumaketha kwasendaweni | Martech Zone
Umaki: ukumaketha kwasendaweni
NgoLwesine, Februwari 4, 2021 NgoLwesine, Februwari 4, 2021 UMandeep Chahal
Ukuqhuba ibhizinisi eliyimpumelelo lezindawo eziningi kulula… kepha kuphela uma unesu lokuthengisa lendawo elifanele! Namuhla, amabhizinisi nemikhiqizo banethuba lokukhulisa ukufinyelela kwabo ngaphezu kwamakhasimende endawo ngenxa yedijithali. Uma ungumnikazi womkhiqizo noma umnikazi webhizinisi e-United States (noma elinye izwe) ngecebo elilungile ungafaka imikhiqizo yakho nezinsizakalo zakho kumakhasimende angaba khona emhlabeni wonke. Cabanga ngebhizinisi lezindawo eziningi njenge
Amabhizinisi endawo alahlekelwa cishe amakota amathathu okuhola kwawo ngenxa yokuvuza kwinqubo yawo yokuthengisa nokumaketha. Noma bephumelele ekufinyeleleni kubathengi online, amabhizinisi amaningi awanayo iwebhusayithi eyakhelwe ukuguqula umkhondo, ungalandeli umkhondo ngokushesha noma njalo, futhi awazi ukuthi iyiphi imithombo yabo yokuthengisa esebenzayo. I-ReachEdge, uhlelo lokumaketha oluhlanganisiwe oluvela kwaReachLocal, lusiza amabhizinisi aqede lokhu kuvuza okubizayo kokumaketha futhi aqhube amakhasimende amaningi ngokusebenzisa kwawo
I-Balihoo: Ukuzenzekelayo Kwezentengiso Zasendaweni
NgoLwesihlanu, ngoJuni 29, i-2012 NgoLwesine, Juni 18, 2015 Douglas Karr
Namuhla besinoShane Vaughan emdlalweni womsakazo exoxa ngemishini yokukhangisa yasendaweni. UShane uyiCMO yeBalihoo, inkampani enikezela ngezinsizakalo zokumaketha zasendaweni. IBalihoo iyipulatifomu yokumaketha ezisebenzisela izinkampani zamabhizinisi ezinezidingo zokumaketha ezingeni lendawo, njengama-franchise, ukusatshalaliswa kwezitolo, noma izinkampani zensizakalo yendawo. Izibonelo zifana ne- 1800Doctors.com, Geico, MattressFirm ukubala ezimbalwa. UBalihoo ungumhlinzeki uNdunankulu wobuchwepheshe bokumaketha kwasendaweni kanye nezinsizakalo kumikhiqizo kazwelonke
Ukuziphatha Komphakathi Kwasendaweni Komphakathi
ULwesithathu, May 30, 2012 ISonto, May 27, 2012 U-Adam Encane
I-Rocketfuel ikhiqize le infographic eneminye imininingwane yokuziphatha kweselula, kwezenhlalo kanye nasendaweni. Impambana yezokumakethwa kwezenhlalo, kwasendaweni, kanye nokwamaselula imele ithuba lokuqala futhi elingasetshenziswanga labakhangisi. Ukwenza umqondo we-SoLoMo landscape, senze i-SoLoMo infographic ehlanganisa ucwaningo lwemboni olufanele kakhulu nocwaningo lwethu oluyinhloko ukuze sabelane ngalokho odinga ukukwazi ngalezi zigaba ezintathu ezigqagqene zethonya lomthengi.